Fanolanana ankizivavy sivy taona: nidoboka am-ponja i Eddy, polisy kaominaly | NewsMada
Par Taratra sur 20/01/2020
Nidoboka avy hatrany am-ponja taorian’ny fanadihadiana lalina nataon’ny mpitsara ao amin’ny fitsarana ao Fenoarivo Atsinanana, ny alakamisy lasa teo, ilay polisy kaominaly antsoina hoe Eddy, miasa ao anivon’ny kaominina ambonivohitr’i Vavatenina…
Taorian’ny fahavotsoran-dRatiarisonina Nirina, fantatry ny maro amin’ny solonanarana hoe Eddy, polisy kaominaly ao amin’ny kaominina ambonivohitr’i Vavatenina, ny 2 janoary lasa teo noho ilay raharaha fanolanana ankizivavikely sivy taona, teo anivon’ny fampanoavana fitsarana ambaratonga voalohany ao Fenoarivo Atsinanana, nitohy ny 16 janoary 2020 teo indray ny fakana am-bavany azy teo anivon’ny mpitsara mpanao fanadihadiana lalina. Raha tokony ho tamin’ny 3 ora tolakandro ny fe-potoana nomena ny mpitory sy ny voampanga ny alakamisy teo, efa tamin’ny 7 ora sy 13 mn kosa vao nantsoina voalohany ny renin’ilay niharam-boina ka naharitra 45 mn teo ny fanadihadian’ny mpitsara azy. Tamin’ny 8 ora sy 45 mn kosa vao nilatsaka ny fanapahan-kevitry ny mpitsara ka naiditra vonjimaika am-ponja ity polisy kaominaly nahavanon-doza ity. Araka ny fampitam-baovao avy any an-toerana, norarana tsy mahazo miresaka amin’ny mpanao gazety ny renin’ilay ankizikely niharan’ny fanolanana.
Milaza ho tsy matahotra fitsarana…
Raha hiverenana ity raharaha ity, anisan’ny vava efa nataon’ny voampanga manerana ny tanànan’i Vavatenina ny hoe misy vola ka tsy misy hatahorany izay fiampangana azy ary tsy hampigadra azy ny fanolanana toy izao. Mpivady Ratiarisonina Nirina na i Eddy sy i Zafinivo Chantal, monina ao amin’ny fokontany Ampasimbola, parisela 25 Ambatobe, Vavatenina. Mbola tsy niteraka izy mivady ireto fa samy manan-janaka avokoa ka roa mianadahy ka anisany i Zafitsiarimamy Chemila, ilay niharam-boina. Mpampianatra ao Vavatenina ilay renin’ity ankizivavikely niharam-boina ity fa any Ambalafary, kaominina ambanivohitr’i Miarinarivo, distrikan’i Vavatenina, izy ireo no mipetraka ka isaky ny zoma tolakandro vao miakatra ao Vavatenina mamonjy ny vady aman-janany ilay ramatoa. Polisy kaominaly eo anivon’ny kaominina ambonivohitr’i Vavatenina i Eddy ka amin’ny fotoana tsy maha eo an-dreniny no hanamparany ny filan-dratsiny amin’ity ankizivavikely ity. Voasokajy ho heloka bevava ny fanolanana ankizikely latsaky ny 15 taona.